ထရေစီ | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / ထရေစီ
Category Archives: ထရေစီ
ဆောင်းဦးလှိုင် – ဟိုတုန်းကထက်ပိုချစ်မယ်
၀၁ ။ အပြိုင်အဆိုင်ဖူးစာ ( ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း) ၀၂ ။ စိတ်ကူးလေးရွက်လွှင့်မယ် ( ထွန်းထွန်း-Example) ၀၃ ။ ကိုကိုစိတ်ကူးယဉ် ( ရေဗက္ကာဝင်း ၊ ဘရိတ်ကီ ) ၀၄ ။ လဘက်ရည်ဆိုင်က်ိုသွားကြစို့ ( Tings) ၀၅ ။ ဟိုတုန်းကထက်လိုချစ်မယ် ( ဆောင်းဦးလှိုင်) ၀၆ ။ ရွှေရတုအချစ် ( NG2K ) ၀၇ ။ ဘယ်သူ့ဘက်မှာ ( ဆောင်းဦးလှိုင် ) ၀၈ ။ နှလုံးသားရဲ့အလို ( ရှင်ဖုန်း ၊ ဆောင်းဦးလှိုင်) ၀၉ ။ တနေ့တော့ဆုံမှာဘဲ ( ရဝေ၊ ဆောင်းဦးလှိုင်) ၁၀ ။ … Continue Reading →
August 20, 2010 Yee Wai Aung ဘရိတ်ကီ အခွေ (အများ) ထရေစီ ထွန်းထွန်း(Example) ရှင်ဖုန်း ရေဗက္က၀င်း ဆောင်းဦးလှိုင် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ဆောင်းဦးလှိုင်2Comments
သင်္ကြန်အတွက်ကို Myanmar Youth Media Club က လုပ်ထားတဲ့ mini Playlist လေးပါ။ ၁) ကလိုက်တော့ – ဘိုလေး ၊ အေးမြမြသက် ၂) အားလုံးအတွက်သင်္ကြန်ပွဲ – Cyclone ၃) သင်္ကြန်ယိမ်း – J me ၄) သင်္ကြမ်ယိမ်း2– J me ၅) အမှတ်တရသင်္ကြန် – မျိုးကျော့မြိုင် ၊ ထရေစီ ၆) ကလိုက်ဦးဟေ့ – စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ၇) လူငယ်ရိုးရာသင်္ကြန် – စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
April 4, 2010 amedeo ဘိုလေး စိုင်းစိုင်း ထရေစီ ရဲလေး ရေဗက္က၀င်း ယုန်လေး မျိုးကျော့မြိုင် သီရိဆွေ သဇင် Cyclone J-Me2Comments
February 14 မှာ ကျရောက်မယ့် ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်သူနဲ့အတူ နားဆင်နိုင်ဖို့အတွက် စုံတွဲ သီချင်းများ Playlist လေးပါ။ ၁) အချိန်နဲ့နေရာ – မျိုးကျော့မြိုင် + ကြည်လဲ့လဲ့ဦး ၂) အချစ်ကို ကိုးကွယ် – ၀ိုင်ဝိုင်း + တင်ဇာမော် ၃) အမြဲတမ်းချစ်သူ – ဘိုဘို + ဆုန်သင်းပါရ် ၄) အဖော် – ဂရေဟမ် + ချောစုခင် ၅) အသက်လို – စည်သူလွင် + ကဗျာဘွဲ့မှုး ၆) ဘယ်တော့မှ မဝေးဘူး – Franco + သီရိဂျေမောင်မောင် ၇) ဒါဟာအချစ်လား – ဇော်ပိုင် + ချောစုခင် ၈) တို့မဝေးဘူး … Continue Reading →
January 30, 2010 amedeo ကြိုးကြာ ဘိုဘို အခွေ (အများ) အဲလက်စ် စည်သူလွင် ထရေစီ ထွန်းအိန္ဒြာဗို ဂရေဟမ် ရှင်ဖုန်း ဆုန်သင်းပါရ် အေသင်ချိုဆွေ ရွှေထိုက် ဆောင်းဦးလှိုင် ဇော်ပိုင် ချောစုခင် ကဗျာဘွဲ့မှုး ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ၀ိုင်ဝိုင်း တင်ဇာမော် မဒီ မင်းမော်ကွန်း မျိုးကျော့မြိုင် သြရသ NGIIK Rဇာနည် Valentine Albums 16 Comments
ဂရေဟမ် – အချစ်လိုအင်
၁. ကြားလား (ရေး-အယ်နောင်း) ၂. ဘာကြောင့် feat. မီးမီးခဲ (ရေး-စောဘွဲ့ မှူး) ၃. အချစ်များသူ့ဆီမှာ feat. ရတနာဦး (ရေးစောခူဆဲ) ၄. စွမ်းအား feat. တင်ဇာမော် (ရေး-ထွဏ်းခမ်) ၅. နှုတ်ဆက်မျက်ရည် (ရေး-ထွဏ်းခမ်) ၆. စင်တော်ကောက် (ရေး-ညီညီသွင်) ၇. ကံကောင့်မယ့်အချစ် feat. လေးလေးဝါး (ရေး-ဆောင်းဦးလှိုင်) ၈. အခုမှချစ်တတ်လာခဲ့ပြီ feat. ချောစုခင် (ရေး-စိုးလင်း) ၉. အိပ်မက်ချစ်သူ (ရေး-ဆဲလ်) ၁၀. အချစ်လိုအင် feat. ထရေစီ (ရေး-စောခူဆဲ) Song titles provided by CG.
May 3, 2009 Mad Computerist အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ထရေစီ ဂရေဟမ် ရတနာဦး ချောစုခင် လေးလေးဝါး တင်ဇာမော် မီးမီးခဲ Myanmar Artist3Comments
ထရေစီ – မင်းလေးစိတ်ကြိုက်
၀၁ တိမ်တွေလို – ထရေစီ + အဲလက်စ် ၀၂ ကိုယ့်အမှား ၀၃ မင်းလေးစိတ်ကြိုက် ၀၄ ဝေးလို့မဖြစ်လို့ – ထရေစီ + စည်သူလွင် ၀၅ ချစ်သူနေ့ညများ ၀၆ ကံကောင်းမဲ့ အချစ် ၀၇ ကမ္ဘာတဖက် – ထရေစီ + ဘိုလို ၀၈ မိုးတွေသည်းလို့ ၀၉ ရောင်စုံပန်းချီ ၁၀ အမေ့အိပ်မက် ၁၁ အလွမ်းဝင်္ကမ္ဘာ – ထရေစီ + ဆောင်းဦးလှိုင် ၁၂ တိမ်တွေလို (Bonus)
November 3, 2008 MusicLover ဘိုဘို အဆိုတော် (မ) အဲလက်စ် စည်သူလွင် ထရေစီ ဆောင်းဦးလှိုင် Myanmar Artist
ဂူးဂူး – မေ့မရတဲ့ နေ့စွဲများ
၁။ မေ့လိုက် – ဂူးဂူး + ကြိုးကြာ ၂။ နာကျင်ခြင်း = အချစ် – ဂူးဂူး + Lလွန်းဝါ ၃။ ဆောင်းနှင်းလေးနဲ့အတူ – ဂူးဂူး ၄။ မေ့မရတဲ့ နေ့စွဲများ – ဂူးဂူး ၅။ အရိုးဆုံးအချစ် – ဂူးဂူး ၆။ သို့ – ဂူးဂူး ၇။ ပခက်လွှဲသောလက်ရိုက်ချက် – ဂူးဂူး ၈။ အလွမ်းညဝေဒနာ – ဂူးဂူး + ထရေစီ ၉။ အစားထိုးချစ်ပါ – ဂူးဂူး ၁၀။ မိုးည..အလွမ်း – ဂူးဂူး ၁၁။ တဒိတ်ဒိတ် – ဂူးဂူး + ဘရိတ်ကီ … Continue Reading →
May 27, 2008 MusicLover ကြိုးကြာ ဘရိတ်ကီ အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ထရေစီ ဂူးဂူး Lလွန်းဝါ Leaveacomment
၁။ ၂၀၀၀လက်ဆောင် – ခရီးသွားငါးယောက် ၂။ ကောင်းကင်ရဲ့အလင်း – ဇော်ဝင်းထွဋ် ၃။ အချစ်မှန်ရင် – စည်သူလွင် ၄။ ဒဏ်ရာတွေ – အဲလက်စ် + ထရေစီ ၅။ သိပ်ချစ်လို့ – ခရီးသွားငါးယောက် ၆။ ပျံသန်းအချစ်ငှက် – ဆောင်းဦးလှိုင် ၇။ တမိုးသောက်အလွမ်း – အဲလက်စ် ၈။ မသေချာဘူး – ဆောင်းဦးလှိုင် ၉။ လွမ်းရယ်မပြေ – Lazy Club ၁၀။ တရားလွန်ခံစားချက်များ – စည်သူလွင် + ထရေစီ ၁၁။ မျှော်လင့်ခြင်းရထား – ခရီးသွားငါးယောက်
May 26, 2008 mmsong အခွေ (အများ) အဲလက်စ် စည်သူလွင် ထရေစီ ဆောင်းဦးလှိုင် ဇော်ဝင်းထွဋ် ခရီးသွားငါးယောက်3Comments
၁။ ထာဝရ ၂။ ပဋိပက္ခ ၃။ အချစ်(သို့)ရှုံးနိမ့်ခြင်း ၄။ တစ်ဘ၀လုံချစ်မည့်သူ ၅။ မငိုပါနဲ့ကလေးရယ် ၆။ သီချင်းလေးအတိုင်း ၇။ အစဉ်အမြဲ ၈။ ချစ်မှာပဲ ၉။ တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ ၁၀။ သင်ခန်းစာ ၁၀၁ ၁၁။ နှလုံးသားရဲ့ကျမ်းစာ ၁၂။ လွမ်းစရာလေးတွေ ၁၃။ အလိုအပ်ဆုံးအရာ
February 12, 2008 mmsong အခွေ (အများ) ထရေစီ ရှင်ဖုန်း ငယ်ငယ် ရွှေထိုက် ရေဗက္က၀င်း ကဗျာဘွဲ့မှုး ခင်ဘုဏ်း ယုဇန မို့မို့ No Twinkle Valentine Albums 8 Comments
၁။ ပထမဆုံးချစ်သူ – စည်သူလွင်+ထရေစီ ၂။ ငြင်းပယ်ရင်းချစ်ခဲ့ – စည်သူလွင်+လေးလေးဝါး ၃။ နားလည်ခဲ့သော် – စည်သူလွင်+ထရေစီ ၄။ မင်းနဲ့ဝေး – စည်သူလွင်+ဟေမာနေ၀င်း ၅။ ထာဝရအတွက် – စည်သူလွင်+ချောစုခင် ၆။ ပြန်လာခဲ့မယ် – စည်သူလွင်+3G ရ။ ခိုင်မြဲသောအချစ် – စည်သူလွင်+စိုးစန္ဒာထွန်း ၈။ ဒီအတိုင်းပဲဆက်ချစ်မယ် – စည်သူလွင်+ရတနာဦး ၉။ တစ်သက်သာ – စည်သူလွင်+ပိုးအိစံ ၁၀။ အချစ်ကလမ်းပြခဲ့တယ် – စည်သူလွင်+ခိုင်ဆုဝေ
February 11, 2008 mmsong အခွေ (အများ) စိုးစန္ဒာထွန်း စည်သူလွင် ထရေစီ ရတနာဦး ပိုးအိစံ ချောစုခင် ဟေမာနေ၀င်း Valentine Albums ခိုင်ဆုဝေ 12 Comments
၁။ ပထမဆုံးချစ်သူ ၂။ တို့မဝေးဘူး ၃။ အသက်လို ၄။ နားလည်မှု ၅။ ငယ်ချစ်ဟောင်း ၆။ ငြင်းပယ်ရင်းချစ်ခဲ့ ၇။ မေ့မရတဲ့အချစ် ၈။ ထာဝရအတွက် ၉။ နှုတ်ဆက်ချိန် ၁၀။ ကြယ်စင်တွေရဲ့ ဘာသာစကား
February 11, 2008 mmsong အခွေ (အများ) စည်သူလွင် ထရေစီ ဆုန်သင်းပါရ် ချောစုခင် လေးလေးဝါး ကဗျာဘွဲ့မှုး တင်ဇာမော် Valentine Albums Leaveacomment
၁။ ပထမဦးဆုံးချစ်သူ – စည်သူလွင်+ထရေစီ ၂။ တို့မဝေးဘူး – စည်သူလွင်+လေးလေးဝါး ၃။ အသက်လို – စည်သူလွင်+ကဗျာဘွဲ့မှုး ၄။ နားလည်မှု – စည်သူလွင်+တင်ဇာမော် ၅။ ငယ်ချစ်ဟောင်း – စည်သူလွင်+ဆုန်သင်းပါရ် ၆။ ငြင်းပယ်ရင်းချစ်ခဲ့ – စည်သူလွင်+လေးလေးဝါး ၇။ မေ့မရတဲ့အချစ် – စည်သူလွင်+တင်ဇာမော် ၈။ ထာဝရအတွက် – စည်သူလွင်+ချောစုခင် ၉။ နှုတ်ဆက်ချိန် – စည်သူလွင်+လေးလေးဝါး ၁၀။ ကြယ်စင်တွေရဲ့ ဘာသာစကား – စည်သူလွင်+ထရေစီ
January 18, 2008 mmsong အခွေ (အများ) စည်သူလွင် ထရေစီ ဆုန်သင်းပါရ် ချောစုခင် လေးလေးဝါး ကဗျာဘွဲ့မှုး တင်ဇာမော် Valentine Albums3Comments